Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Perth oo fashilsay isku-day ay Gumaysi-Kalkaalka ku soo dhaweynayeen cadawga Umadda
Jaaliyadda Perth oo fashilsay isku-day ay Gumaysi-Kalkaalka ku soo dhaweynayeen cadawga Umadda
Jaaliyada S.Ogadenia ee Galbeedka Australia ayaa shalay oy taariikhdu ahayd 28/12/13 ku qabtay mudaharaad aad u xamaasad iyo cadho badan hotel la doonayay in lagu martiqaado nin Wayaana ah. Jaaliyada S.Ogadenia oo ka warheshay arintaa ayaa ku banaanabxday dambiilahan doonaya inuu dambiyada shacabka S.Ogadenya laga galay ku duudsiyo soo dhaweyn kooxo dabadhilif ah oo dhuuniqaatayaal ah. Ninkan ayaa u sharaxan safiirnimo oo doonaya inuu sawiro la galo kooxaha daba dhilifka ee u adeegaya gumaysiga.
Waxaa kaloo ka mid ahaa ujeedada shirkan loogu qabanayay magaalada Perth iyadoo cadawga uu dareemay culayska jaaliyada Ogadenia ee Perth taasoo dhalisay in safiirka u jooga dalka iyo kuwa damiir laawayaasha ah lagu canaanto oo lagu qasbo in ay shirar iyo abaabul ka dhex qabtaan xarumaha jaaliyada Ogadenia ee Australia.
Hadaba waxaa barqanimadii Hotelka Duxton Hotel oo ahayd goobta uu cadawgu ku qabsanayay shirka isugu soo baxay dadwayne aad u cadhaysan oo ka gadoodsan arintaa oo watay boodhadh ay ku qoran yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya taasoo ka argagixisay kana fajicisay maamulkii Hotelka, policekii iyo waliba dadkii wadooyinka marayay.
Jaaliyada S.Ogadenia ee Perth ayaa siduu wariyaha ONA nooga waramay marwalba heegan u ah sidii loo fashilin lahaa shirqoolada gumaysiga Itobiya oo looga dulqaadi lahaa shacabka dulman ee Ogadenia heeryada gumaysiga.
Banaanbaxan waxaa ka horeeyay in dacwad laga gudbiyay dambiilaha taasoo keentay in meeshii hore ee loogu talagalay inay shirka ku qabsadaan laga kansalay, Hotel-kaa oo aha Pan Pacific, kadibna ay daba dhilifka gumaysigu si qarsoodi ah Duxton Hotel u kiraysteen balse ayna u suurtagalin inuu u qarsoomo una dhaco shirkaas siday rabeen.
Dadkii gumaystaha matalayay ayaa waji gabax xun kala kulmay meesha iyadoo ukumo qudhmay loogu qubeeyay qasabna ay ku noqotay siduu noogu soo waramay wariyaha goobta in gudaha hotelka boolisku ku xayiray si lafahooda loo ilaaliyo. Waxaa kaloo qasab ku noqotay in si dagdaga ah loo dhameeyo ka dibna si dhuumaal ah looga bixiyo hotelka.